ENWETARA OGBUNIGWE N’ISI ỤLỌ ỌRỤ PDP N’ABAKALIKI – hoo!haa!!
Aka na-achị steeti Ebonyị bụ David Umahi nọrọ na Wenesidee gara aga kwue na ndi uwe ojii nke steeti ahụ achọpụtala ihe na-agbawa n’iké ana-enyo enyo dịka ogbunigwe n’isi ụlọ ọrụ ndi PDP nke dị n’okporo ụzọ awara awara si Abakaliki gawa Enugu.
Ọ sịrị na ọbụ nke a mere ya jiri kpọọ nzukọ gbanu gbanu n’obi gọọmenti dị n’Abakaliki bụ isi obodo steeti Ebọnyị. Ndi bịara nzukọ a gụnyere ndi isi ndi uwe ojii, nke ndi agha, nke ndi nche pụrụ iche nke ala anyị, (SSS), nke ndi nchekwa ndi nga, nke ndi na-ahụ maka ọpụpụ na mbata, nke ndi nchekwa nke nkịtị (Civil Defence), nke ndi ahia iwu, na nke ndi ọgwụ iké. Onye ọchịchị a gwara ndi nta akụkọ okwu ka agbasara nzukọ a.
Onye ọchịchị a kwuru na site na ọnụ mmiri okwu ya dọbitere n’aka onye isi ndi uwe ojii steeti ahụ nakwa ndi ọzọ okwu nchekwa dị n’aka, n’ọbụ ndi ọ na-éwú éwú n’obi nọ n’otu ndọrọ-ndọrọ ọchịchị ndi ọzọ kpara ụdị ajọ nkata a.
Ebe ya bụ aka na-achị steeti ahụ bụ onye PDP, okweghị ndi mmadụ nghọta bụ otu ndọrọ-ndọrọ ndi ọzọ o bu n’uche.
Ọ sịrị na nchọpụta na-egosi na otetụla aka edobere ya bụ ogbunigwe ahụ. O kwukwara na nwa mgbe gara aga, na ya nwere nzukọ na isi ụlọ ọrụ ha ahụ mana Chukwu ekweghị ka ya bụ ogbunigwe gbawaa ma gbue ya. Ọ sịrị na Chukwu agaghị ekwe ka nke a mee. O wee kwue sị: ‘ndi anyị na-enyo enyo maka nke a bụ ndi otu ndọrọ-ndọrọ ọchịchị ndi ọzọ enweghị ọrụ ma bụrụkwa ndi ọ na-ekpo ekpo n’obi ibata n’ọchịchị na afọ puku abụọ na iri na itolu. Ọ sịrị na ha chere na ha ga-ewere ọchịchị n’ụzọ abụna ụzọ.
Mazị Umahi kwuru na ya enyela ndi ọrụ nchekwa ntụzi aka, ka ha mee nnyocha tọrọ atọ ma wegara ndi isi ha dị iche iche nchọpụta ha, ebe ha bụ ndi ọchịchị ga-ewegara onye isi ala nchọpụta nke ha.
Umahi kwakwara akwa arịrị maka ụmụ ogbugbu na mmebi na-aga n’ihu na steeti Ebonyi ugbua, bụ nke ọ sịrị n’ ọbụ ndi ọgụ nzuzo si steeti Cross River ka-ana-ama imi maka ya. O kwuru na-agbanyeghị mbọ udo ya na-agba n’etiti ndi Edda dị n’ime okpuru ọchịchị ime obodo Afikpo na Oferekpe n’ime ọchịchị ime obodo Ikwo nke steeti Ebọnyi, na tigbue zọgbue ndi a ka na-aga n’ihu. Ọ sịrị na ndi ọchịchị ya nwetakwara kepu kepu site n’aka ndi nchekwa gbasara ogbugbu ndi si steeti Cross River na-egbu ndi Edda nakwa Oferekpe. Ọ kwuru na ya ekpesarala ya onye isi ala nakwa osote ya. Ọ sịkwara na ya emegarala ọtụtụ ndi ọzọ mkpesa maka nke a, mana mkpesa ya dịka ogbe aja ezigara ozi n’ime mmiri. N’okwu ya, ‘agwala m ndi nke m ka ha gbaa mbọ, were ọbụragodu okwute na-echekwa onwe ha. Ike ịnọrọ ka-ana-egbu anyị ka anyị bụ ọkụkọ agwụla m.’
Onye ọchịchị a kagbukwara ogbugbu ahụ yiri nke ndi otu nzuzo egburu mmadụ abụọ n’okpuru ọchịchị ime obodo Ohaukwu na steeti Ebonyi.
Aka a na-achị Ebonyi kpọkukwara ogbo ya nke Anambara, ka o were ịhụnanya dị n’etiti steeti abụọ ndi a hapụ igbanwo aha ogbe ahụ ejiri Abakaliki street mara n’isi obodo steeti Anambara bụ Ọka. O gara n’ihu guzobe otu kọmitii ga ejekwuru aka na-achị steeti Anambara maka idozi okwu a. Ọ bụ ode akwukwọ gọọmenti Ebonyi bụ Hyginus Nwokwu bu onye isi oche kọmitii a.
Ọ ñụrụ ya dịka iyi na-aga edozi okwu a mgbe na-adịghị anya.
Previous Post: AGAM ANỌCHI EKWEREMADỤ – Uche Onyekwere.
Next Post: Ndi DSS awakpoola ụlọ Abaribe maka Nnamdị Kanụ